Obi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Esi kwadebe ubi ubi
Onye ọ bụla nwe ubi na-achọ ime ihe na-atọ ya ụtọ na-ahọrọ na ọ ga-eme ka ọ dị mma, na mpaghara dum nke dịpụrụ adịpụ kwekọrọ n'echiche niile nke onye nwe ya, atụmatụ ya kwesịrị ekwesị ga-abịa napụta. Kedu otu esi agakwuru mbipụta nke atụmatụ? N'ịbụ ndị na-eche echiche na nhazi nke ubi ubi maka isii ma ọ bụ karịa acres, buru ụzọ zaa ajụjụ ndị a: Gịnị bụ enyemaka nke mpaghara ahụ?
Otu esi eme ka arbor maka inye
O doro anya na ụlọ okpomọkụ ahụ ga-abụ ebe ezumike kachasị amasị na ezinụlọ dum. O zuru oke maka mgbakọ ndị enyi na mgbede na kebabs ma ọ bụ igwe anumanu. N'ime nnukwu ụlọ dị mma nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike idozi. Arbor aka aka gị, họrọ ihe maka ihe owuwu Ya mere, a kpebiri!
Petrol trimmer inye, nke kacha mma ịhọrọ
Ndị na-agba mmanụ na ndị na-emepụta mmanụ na-adaba adaba, dị mma ma dị mma, dị mma maka ịrụ ọrụ n'ụlọ ọ bụla. Ha na-anagide ahịhịa na mpaghara dị iche iche na nha dị iche iche. N'ụzọ bara uru bụ iji ha mee ihe na ebe dị warara, nke a na-esiri ike maka ọkụ ọkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ha dị ọnụ ala ma dị mfe karị ka ha nọgide na-enwe karịa ka ọkụkọ.
Kedu etu esi esi n'aka aka ha mee pergola na mba ahụ
Inye ego n'echere ụlọ na-arụkarị otu n'ime isi ebe n'echiche nke onye nwe ya. Mgbe e wuru ụlọ ahụ, a na-akụkwa ubi na ubi, ana m achọ inwe ebe ị ga-ezumike. N'ebe a, nyere aka maka ihe owuwu ahụ, nke nwere ike ịmepụta n'oge dị mkpirikpi ma mee ya n'onwe gị. Tụlee otú e si eji aka gị rụọ pergola, na-agụ ntụziaka na foto nke atụmatụ ndị mara mma.
Arbor Country nke polycarbonate - uru na ọghọm nke esi eme ya n'onwe gị
N'oge ezumike, ị na-achọkarị ịnọ n'oche ahụ, lee anya site na akwụkwọ ma ọ bụ na-amasị ihe okike ka anyanwụ ghara igbochi. Technology adịghị eguzo, n'oge anyị, ọtụtụ ndị na-arụpụta ụlọ ndị na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ na-eme nke polycarbonate - ihe na-achọpụta ngwa ngwa n'ọtụtụ ebe ọrụ. Taa, anyị ga-amụta otú anyị ga-esi jiri aka anyị wuo polycarbonate gazebo, nyochaa uru na nkwekọrịta, ma dee usoro iwu ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Kedu otu esi ewu ụlọ okpuru ulo na mba a?
Ọ dị ka onye ọ bụla na-anọ n'oge okpomọkụ nwere okpuru ulo nke ya na saịtị ahụ. Ma ndị na-enweghị ya, ma eleghị anya, nwere ihe karịrị otu ugboro eche banyere ịme ụlọ dị otú ahụ. Nchekwa nke nchekwa na okpuru ulo emeela ogologo oge. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi eji aka gị emebe okpuru ulo na-enweghị enyemaka nke ndị na-ewu ụlọ.
Brazier ji aka ya mee nkume
Ọ bụrụ na ị na-esi nri kebabs n'èzí, mgbe ahụ gị, nke mbụ, ịzụta ịzụta ihe mgbochi ma ọ bụ tinye nsụgharị na-adịghị mma. Ịzụta ígwè ígwè na-adọrọ adọrọ, ma ọ bụrụ na o nweghị ebe ọ ga-etinye mgbe njedebe nke nri ahụ, ígwè ígwè ahụ ga-aza ngwa ngwa ma bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere. Karịsịa ebe ọ bụ na ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ buru ibu na ịzụta ya.
Kedu otu esi eji aka aka mee ubi mara nma?
Ezumike na mba nwere umu nwere ike ime ka obi di gi uto site n'inye saịtị gi na ihe ndi ozo di iche iche. Nke a bụ akụkụ akụrụngwa, na ebe egwuregwu ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya na ịmepụta na mgbakọ nke nkedo osisi maka inye aka gị, eserese na foto nke nhọrọ nwube dị iche iche.
N'onwe Gị uzo maka ogige: esi eme ladybug (na foto)
Taa, ndị na-elekọta ubi na-achọ iju anya ọ bụghị nanị site na ịkụ mkpụrụ osisi ndị mbụ na ndị dị mkpụmkpụ, kamakwa site n'ịkwalite atụmatụ ha. Ladybug, nke e ji aka rụọ, bụ nkà dị iche iche na-enweghị atụ. Site na nkume Maka imepụta ladybugs, ọ dị anyị mkpa: mkpụ ojii ojii; pensụl; ọtụtụ brushes; akpụkpọ anụ na varnish; ụfọdụ gluu maka gluu
Esi mee ụlọ elu, ụlọ na ụgbọala
Teknụzụ ịmepụta ụlọ na-ekpuchi mgbidi elu abụọ dị elu bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ụwa. Ọ na-eme ka o kwe omume iji chebe ihe owuwu ahụ ka ọ bụrụ nke kachasị elu site na ụdị mmiri ozuzo ọ bụla, yana ịmepụta nnukwu ọnụ ụlọ nnukwu ụlọ. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịrụ ụlọ dị otú ahụ, maka ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ, ọkpụkpụ onye na-ewu ụlọ a na-arụ ọrụ siri ike.
Esi ewepu ulo elu nke ụlọ
Attic - nke a bụ ụlọ dị mma, nke dị n'okpuru ụlọ, nke bụ, n'ezie, bụ ụlọ elu ebe obibi. Taa, a na - ejikarị ya eme ihe na iwu ụlọ na ụlọ obibi. Otú ọ dị, mgbe ị na-eji ụlọ elu dịka ebe obibi, a ghaghị iburu n'uche na a ga-achọ ụlọ mkpuchi dị elu, ebe o nwere ike ịdị jụụ na iru mmiri n'oge oyi ma dị ọkụ n'oge okpomọkụ.
Esi mee ka okooko osisi gị si na karama plastic
Kwa ụbọchị, ụmụ mmadu na-atụba ọtụtụ ngwaahịa plastik, na-echeghị banyere gburugburu ebe obibi, ma a pụrụ iji ihe mkpofu ahụ mee ihe kwa ụbọchị. Karịsịa, ọtụtụ ndị omenkà na-emegharị iji mepụta okooko osisi site na karama plastic na-enweghị ihe ọ bụla maka ime mma na ime ụlọ. Otu esi eme nke a na ihe bara uru, tụlee n'okpuru.
Kedu ihe ka mma ịhọrọ: olulu mmiri ma ọ bụ olulu mmiri inye?
N'oge na-adịghị anya, ndị nwe dachas, ndị na-adịghị enwe ezigbo ohere iji nweta mmiri na-ejikọta ọnụ, chee banyere ajụjụ nke ịchọta mmiri. Na nke a, naanị nhọrọ bụ ala dị n'okpuru ala. Iji kpebie otu n'ime ụzọ mgbu mmiri ịhọrọ - olulu ma ọ bụ olulu mmiri, onye kwesịrị ịchọpụta uru na ọghọm nke onye nke ọ bụla.
Otu esi achọta mmiri na ebe di nma: ima mmiri, ihe egwu
N'ebe mmiri na-adịghị na mpaghara dịpụrụ adịpụ, ndị nwe ha na-ejikarị mmiri egwu egwu ma ọ bụ igwu olulu. Ọ dị mkpa na mmiri ahụ dị mma. Ọ bụ ya mere, ọbụnadị tupu ịmalite ọrụ, ọ bara uru iji nyochaa ihe banyere mmiri mmiri, ụdị ha na ụzọ ọchụchọ, yana ụzọ maka ịchọta oke mmiri ọṅụṅụ - anyị ga-enyocha ihe a nile n'isiokwu ahụ.